Iyo yakasviba modhi pfungwa iri kuwedzera kuve inozivikanwa. Mazuva ano, ese maficha anozivikanwa anopa erima modhi kana yehusiku maitiro Zvishandiso zveMicrosoft Office zvave zvichipawo madimikira erima kwemakore, asi nzira yemwenje yakavhurwa nekutadza.
Kana iwe uchida iyo yakasviba modhi kana rima tema, iwe unogona kugonesa zvakafanana muHofisi Word, Excel, PowerPoint, uye mamwe maapplication ari chikamu che Microsoft Office.
Pamusoro pekushandura rima nzira, maoffice eOfisi anopa sarudzo yekumisikidza kana kudzima iyo yakasviba modhi zvichienderana neyako Windows 10 dingindira.
Dzorera rima kana kudzima manyore muOfisi Yezwi, Excel & PowerPoint
Step 1: Vhura iyo Office Word, Excel, kana PowerPoint application. Tiri kushandisa chirongwa cheIzwi mune iri gwaro, asi rinoshanda nemamwe mapurogiramu eHofisi zvakare
Step 2: Click on faira menyu uye wobva wadzvanya pane iyo Options kuvhura iyo Word / Excel / PowerPoint Sarudzo dialog.
Step 3: Mu Gadzirisa kopi yako yeMicrosoft Office chikamu, sarudza kana Gima rima or Nhema kubva pane yekudonha-pasi menyu padyo ne Musoro weHofisi. Ini pachangu ndinoda Rima Grey pamusoro peiyo izere Nhema tema, asi iwe unogona kusarudza dingindira sekuenderana nezvaunoda.
Step 4: Kamwe dingindira rasarudzwa, tinya pane iyo OK bhatani kusevha marongero uye nekushandisa iyo ichangosarudzwa theme Dingindira idzva rinofanira kuoneka nekukasira. Unogona kuvhara Sarudzo dialog izvozvi.
Tip: Nguva dzose mushure mekushandura iyo yakasviba modhi, iyo peji remberi ruvara inoramba iri default chena kumashure. Kuti uchinje peji rekumashure, enda ku patani > Page pevara muShoko.
Chinja chinja Hofisi Word / Excel / PowerPoint theme kuita rima
Kana iwe usiri kuda kudzima kana kudzima iyo yakasviba modhi muHofisi zvirongwa, unogona kumisikidza iyo Hofisi zvirongwa kuti zvingoerekana zvachinja kuita rima kana light mode kuti iwirirane ne Windows theme. Ndokunge, kana yakagadzirirwa, iyo hofisi theme inoshandurwa otomatiki kuita rima kana iyo yerima modhi yakavhurwa mukati Windows 10. Shandisa chinhu ichi kana iwe usiri kuda kushandisa iyo yakasviba modhi nguva dzose.
Step 1: Mune chirongwa cheHofisi, tinya pane iyo faira menyu uye ipapo chengeta Options.
Step 2: Muchikamu chacho Options dialog, mu Gadzirisa kopi yako yeMicrosoft Office chikamu, sarudza Shandisa system yekumisikidza sarudzo kubva kumenyu inodonhedza padhuze neiyo Hofisi theme.
Ndizvozvo! Kubva ikozvino zvichienda mberi, hofisi yako yekushandisa theme ichave ichienderana ne Windows 10 theme. Nenzira, kana iwe usina chokwadi nezve nzira yekubatidza iyo yerima modhi mu Windows 10, taura nezvedu kuvhura kana kudzima yerima modhi mukati Windows 10 mutungamiri.
Baya OK bhatani kushandisa shanduko.
CHERECHEDZA: Kana otomatiki switching yakavhurwa, Hofisi zvirongwa zvinoshandisa iyo nhema tema. Kana iwe uchida kushandisa iyo Rima grey tema pachinzvimbo, iwe unofanirwa kuisarudzira pamurume (tevera nhanho dziri muMethod 1 yataurwa pamusoro) nekufamba muOfisi Sarudzo> General tebhu> Gadzirisa kopi yako yeMicrosoft Office chikamu.
14 PowerPoint Mharidzo Matipi ekugadzira Akawanda Ekugadzira Slideshows [+ Matemplate]
Ongorora: EVGA X570 DARK